February 2018 – Kalfadhi
Taariikhda Golaha Sharci-dejinta Soomaaliya
February 22, 2018 February 22, 2018 Kalfadhi
Taariikhda Golaha Sharci-dejinta Soomaaliya wuxuu ka soo billowdaa xilligii nidaamka Daakhiliyada ee xornimada ka hor. Tartankii ugu horreeyay ee doorashada Golaha Shacabka ee sanadkii 1956, waxaa ku tartamay xisbiyada SYL, HDM, SDM iyo MU. Doorashadaas waxaa ku soo baxay 70 kursi oo toban ka tirsan loo qoondeeyay jaaliyadihii dalka markaas ku noolaa. Kuraastii ugu badnayd ee Golaha Shacabka waxaa ku guuleystay xisbigii SYL. Waxaa Golahaas Shacabka ee ugu horreeyay guddoomiye u noqday mudane Aadan Cabdulle Cismaan. Bishii Maarso sanadkii 1959 waxaa koonfurta Soomaaliya ka dhacday doorashada Golaha Shacabka, 90 kursi…
Adeegyada ay tahay Dowladda Hoose ee Xamar inay u qabato dadka
Muwaaddinka wuxuu dowladda hoose xaq ugu leeyahay waxqabad beddel u noqdo canshuurta uu bixiyo. Labada dhinac waxaa saaran waajib is-taageerid ah si ay u wada guuleystaan. Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya burbur dowladeed iyo dagaallo qaatay in ka badna labaatan sano ma aha in dowladda loola xisaabtamo sidii inay maamusho dal hagaagsan, laakiin waxaa jiri kara adeegyo ay awooddo, ayse ka gaabisay. Dowladda hoose ee degmo, magaalo ama caasimad waa maamulka hoose ee deegaankaas. Nidaamku waa inuu doorasho ku yimaado, hase yeeshee inta badan degmooyinka Soomaaliya taasi weli…
Xaggee ayuu ka imaanayaa dhaqaalaha miisaaniyadda 2018?
February 20, 2018 Kalfadhi
Miisaaniyadda qaranka ee sanadkan 2018 ee uu meel-mariyay baarlamaanka, wadarteedu waa $274.6 milyan. Filashada dakhliga gudaha ka soo xaroonaya ayaa lagu qiyaasay sanadkan $156 malyan oo ka dhigan boqolkiiba 57 wadarta guud. Dakhliga dibadda ka imaanaya ee miisaaniyaddan waa $118.6 milyan. Haddaba waa kuwee ilaha gaarka ah ee la filayo inuu ka soo xaroodo dhaqaalaha miisaaniyadda 2018? Filashada dakhliga gudaha Dakhliga gudaha wuxuu ka kooban yahay canshuuraha iyo khidmadaha kala duwan ee uu sharcigu jideeyay ee dowladda ay ka hesho gudaha dalka. Guud ahaan canshuurta ayaa la filayaa sanadkaan inay…
Xildhibaan Sagal Cabdirisaaq Biixi
February 20, 2018 March 1, 2018 Kalfadhi
Sagal Cabdirisaaq Isaaq Biixi oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho bishii Diseembar ee sanadkii 1982. Deegaan-doorashadeeda waa Jubbaland. Magaalada Kismaayo ayaa lagu doortay bishii Nofeembar, 2016. Waxbarashada iyo takhasuska Waxbarashadeeda aasaasiga ah ilaa heer jaamacad waxay ku qaadatay gudaha Soomaaliya. Degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo ayay ka soo dhigatay dugsiga hoose. Sanadkii 2003 ayay ka baxday dugsiga dhexe iyo sare ee Axmed Gurey ee Muqdisho. Jaamacadda Muqdisho ayay ka qalinjebisay sanadkii 2007. Waxay ku takhasustay culuumta maamulka iyo maareynta.…
Xildhibaan cusub oo kusoo biiray Golaha Shacabka Soomaaliya
February 15, 2018 February 15, 2018 Kalfadhi
Kismayo maanta waxa ay u ahayd jawi doorasho oo waxaa lagu soo dooranaayay kursigii uu ka geeriyooday Xildhibaan Marxuum Cabaas Siraaji oo lagu dilay dabayaqaadii sanadkii 2017ka magaalada Muqdisho. Kursigaan oo doorasho degaankiisu ahayd Kismaayo ayaa waxaa u tartamay laba musharax oo kasoo jeeda degaanada Jubaland si loo buuxiyo kursiga uu baneeyay Cabaas Siraaji allaha u naxriiste. Doorashada kursigaan waxaa u taagnaa wiilka la dhashay Marxuum Cabaas oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdullahi Siraaji waxaana kursiga kula tartantay Gabar magaceedi lagu soo koobay Fardowso. Madasha doorashada ay ka dhacaysay waxaa goob…
Maxaad ka fahamsan tahay canshuurta iibka – VAT?
Wasaaradda Maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay dib u billowday inay qaaddo lacagta canshuurta iibka, Value Added Tax (VAT) oo ganacsiga dalka ka marneyd tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991. Canshuurtan oo ah nooc ka mid ah canshuurta aan tooska ahayn waxaa lagu dalacaa qofka macmiilka ah ee badeecada iibsada ama loo qabto adeeg ganacsi la xiriira. Waxaa soo diyaarisa wasaaradda maaliyadda si la mid ah canshuuraha kale. Amiin Jamaal oo bare ka ah kuliyadda dhaqaalaha ee Jaamacada Plasma ee magaalada Muqdisho…
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi Axmed
February 13, 2018 February 13, 2018 Kalfadhi
Axmed Macallin Fiqi Axmed oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu ku dhashay Muqdisho labadii Abriil 1971. Deegaan-doorashadiisa waa Galmudug. Doorasho 28-kii Nofeembar, 2016 ka dhacday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa xildhibaan loogu doortay. Waxbarashada iyo takhasuska Dugsiga hoose ee Waaberi ayuu ku biiray 1977. Wuxuu ka baxay dugsigii dhexe ee Sheekh Suufi sanadkii 1984-kii, isagoo 1988 ka baxay dugsigii saree e KPP. Isla sanadkaas wuxuu qeyb ka noqday shaqadii gurmadka qaranka oo xilligaas muddo labo sano ah ay khasab ku ahayd arday…
Taariikhda haweenka Soomaaliyeed ee ay kula tahay in lagu qoro Wikipedia
February 11, 2018 February 11, 2018 Kalfadhi
“Haweenka Soomaaliyeed ee horseeday isbeddelka siyaasadeed, dhaqan iyo dhaqaale” – Tee baad u soo xuli lahayd in lagu soo qoro bogga ugu weyn adduunka ee ay ku keydsan yihiin xogta iyo mowduucyada kala duwan, Wikipedia? Xogta ku jirta Wikipedia waxay ififaale u tahay nooca adduun ee noo muuqda. Laakiin waxaa bogga ka dhex jirta isku-dheelli-tirnaan la’aan, sida guud ahaan dunidaba ay uga jirto: 90 boqolkiiba kuwa uu macluumaadkooda ku jiro waa rag. Qoraallada ragga ku saabsan waxay afar laab ka badan yihiin kuwa laga qoray dumarka. Haweenka Soomaaliyeed gebi ahaanba…
February 8, 2018 February 8, 2018 Kalfadhi
Miisaaniyadda 2018 waxaa hal-ku-dhig looga dhigay ‘Ku-tiirsanaanta dhaqaalaheenna’. Waxaa la filayaa dakhliga gudaha ka soo xaroonaya dartiis inay sanadkan ku kororto ku dhowaad 14 boqolkiiba marka la barbarbdhigo intii laga helay sanadkii hore. Dhinaca qoondaha marka la fiiriyo, waxas loo qeybiyay ilaa shan qeybood ama hay’adood oo ay qeyb ka yihiin wasaaradaha iyo guddiyada. Waxay kala yihiin; Hay’adaha adeegga maamulka guud oo loo qoondeeyay lacag dhan $119.6 milyan (43.6%) ee wadarta miisaaniyadda. Hay’adaha adeegga difaaca iyo amniga oo iyagana loo qoondeeyay $89.8 milyan (32.7%). Hay’adaha adeegga dhaqaalaha oo kuwa wax-soo-saarka…